Maalinta: Febraayo 16, 2018
Madaxweyne kuxigeenka Khadka Taraafigga ah ee Mudaharaadkii Koowaad
Baabuur wadida tijaabada ah ayaa ka bilaabmay wadada la yiraahdo Konak, halkaas oo soosaarka khadka la dhammeeyay. Safarkii ugu horreeyay ee u dhexeeya Halkapınar iyo Üçkuyular wuxuu ahaa Duqa Magaalada İzmir ee Magaalo Weynta Aziz Kocaoğlu iyo xubnaha saxaafadda. Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir, qiyaastii 450 milyan [More ...]
Dadka Deegaanka ah waxay ku wadi doonaan Tareenka Xawaaraha Sare ee 2020
Bursa waa magaalo heysata dhamaan noocyada kala duwan ee fursadaha gaadiidka iyada oo dadkeedu ay ka badan yihiin 3 milyan, meesha isgoyska u dhow magaalooyinka waaweyn iyo wax soosaarka warshadaha. Dhawaan ayaa muhiim u ah dhulka, hawada iyo gaadiidka badda [More ...]
Ka qaadista jawaabta laga soo qaado CHP ilaa Kaabayaasha, Lama Yeelo Baabuurta
Golaha Magaalada Caasimadda Istambul (IMM) Golaha Sultanbeyli Pond Park iyo Aydos Castle in laga sameeyo inta u dhaxaysa mashruuca baabuurta Sultanbeyli Cable Car Line ballaaran iyo qorshayaal horumarineed oo yar ayaa la aqbalay. Baarlamaanka CHP way diidan yihiin soo jeedinta [More ...]
Olole ayaa laga bilaabay Change.org si loo kordhiyo adeegyada taraamada Samsun. Ololaha saxiixa, Samulaş, oo ah astaamaha ololaha, ayaa laga codsaday inuu kordhiyo adeegga taraamka ee Samsun isla markaana ka shaqeeyo ka saaridda taraamyada microbes-ka. [More ...]
Shaqaaluhu wuxuu lumay noloshiisii ​​Madaarka Saddexaad
Warka ku saabsan shil kale oo shaqo ayaa ka yimid dhismaha garoonka diyaaradaha saddexaad ee Istanbul. Shirkadda MNG biyuhu maraan ee sabab u ah shaqaalaha lamadegaan ah Jennifer Türkben sare si ay u dhacay ku dhintay shilalka shaqada iyo garoonka saddexaad on ajandaha Turkiga fadhiya [More ...]
Kanaalka EIA ee ku yaalla Kanal Istanbul
In kasta oo Wasiirka Gaadiidka, Arrimaha Badaha iyo Isgaarsiinta Ahmet Arslan uu ku dhawaaqay jidka Channel Istanbul ee 15 Janawari, faylka EIA wali looma dirin Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka. Faylka Channel Istanbul ee EIA ee faylka lagu codsado ayaa ugu horreeya bisha Diseembar [More ...]
İzmirliler oo ka horjeeda nidaamka cusub ee IZBAN
Xilligii IZBAN 'Plus Money' wuxuu bilaabay xanuun badan. Kuwa aan haysan lacag ku filan kaararka ay ku shaqeeyaan mashiinnada wax lagu kala iibsado, kuwa doonaya inay saaraan mashiinnada xanibaadda 'Plus Money' waxay safka hore kaga jireen safka hore ee 136 KM u dhexeeya Aliaga iyo Selcuk [More ...]
Saraakiisha Weeraray Dadka Muwaadiniinta haysta Jawaab aan toos aheyn oo ku meel gaar ah oo ku yaalla IZBAN
Nidaamka xaafadaha Izmir ee ka tirsan degmada Izban CHP ayaa maanta hirgaliyay mushahar si tartiib tartiib ah iyo qarin isugeyn ah oo ka dambeysa codsigan waa falcelin isa soo taraya. Fiidkii Karşıyakamasaafada ugu dhow, laakiin tan ugu fog [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Mersin waxay cusboonaysiisaa wadooyinka basaska ee u adeega Mersin dhamaantood waxayna siisaa deg deg, adeegyo gaadiid dadweyne oo tayo sare leh oo tayo sare leh dadka daggan Mersin Khadadka dib loo cusbooneysiiyay, wadooyinka buuxin doona baahida ayaa la abuuray dhibaatooyinka dhibaatooyinka taraafikada ayaa la xalliyaa. [More ...]
RayHaber 16.02.2018 Warbixinta Shirka
Kaydinta Kaydinta Korantada Qufulka ee Qufulida iyo Qufulka Amniga Qufulka / Adeegga Kala Bixinta Adeegga Iibsiga Dayactirka Shaqada iyo Adeegga Dayactirka ayaa la qaadi doonaa Adeeg Cuntada ayaa la qaadi doonaa (TÜDEMSAŞ)
Intaa waxaa dheer in laydhka IETT ee Esenyurt
Duqa Magaalada Caasimadda Istanbul Mevl Met Uysal, oo sii waday inuu booqdo degmooyinka si aan kala joogsi lahayn ilaa markii uu xafiiska qabtay, wuxuu booqday degmada Esenyurt wuxuuna qabtay kulan ku saabsan maalgashiga iyo mashaariicda. Duqa magaalada Esenyurt [More ...]
Tareennada State ee Jamhuuriyadda duulaan ugu Turkey ee qiimaha waa la soo dhaweynayaa cajiib xaflad lagu qabtay Erzurum rakaabka ku safraya Orient Express. Duqa Magaalada Mehmet ee Erzurum Dowlada Hoose ee Magaalada, xarunta tareenka ee Erzurum [More ...]
Digniinta Dheeraadka Dheeriga ah ee loogu talagalay Khadka Wadajirka ah ee TkD
The Republic of Turkey State Tareennada (TCDD) General Directorate, digniin danab sare ee line tareenka Sincan Ankara-Kayaş la sameeyey. Qoraalka qoraalka ah ee uu soo saaray Agaasinka Guud ee Tareenka Waddooyinka ee Turkiga (TCDD), khadka tareenka ee Sincan-Ankara-Kayaş ee la dhisay hoosteed [More ...]
tobnaad xadiidka xawaaraha sare ee World Congress of the Republic of Turkey Tareennada State (TCDD) General Directorate of Midowga Caalamiga ah ee Tareennada Business marti (UIC) by, 8-11 2018 lagu qaban doono Ankara ee May. Ururka Caalamiga ah ee Tareenka [More ...]